अण्डा खाएपछि भुलेर पनि खान नहुने यी २ चिज, नत्र पछुताउनु पर्ला ! – Sapana Sanjal
July 5, 2021 335
Sapana Sanjal : अण्डा खाएपछि भुलेर पनि खान नहुने यी २ चिज, नत्र पछुताउनु पर्ला ! हामिले धेरै खानेकुराहरु एकैसाथ मिसाएर खाने गर्छाैँ किनकी कुनै चिजहरु एक साथ मिसाएर खाँदा स्वादिष्ट हुन्छ ।
Prevवहुउपयोगी गुर्जो कसरी र कति खाने ? यसका वेफाइदा पनि छन् जानी राखौं